Waxbadan kula kasbado Robotyadayada Ganacsi | Ka ganacsiga Robot
(Wanaagsan in la ogaado…)
in ka badan 1 sano (AR)
in ka badan 4 sano (AR)
in ka badan 7 sano (AR)
in ka badan 1 sano (SR)
in ka badan 4 sano (SR)
in ka badan 7 sano (SR)
Waxbadan kula kasbado Robotyadayada Ganacsi
Ma jeceshahay inaad hesho dakhli dadban oo raaxo leh iyo / ama kala duwanaan ku samee maalgelintaada, iyadoon waqti badan qaadanayn, oo aan lahayn cadaadis nafsaani ah, iyo xitaa iyadoon aqoon u lahayn suuqa saamiyada ama barnaamijyada?
Nos Robotyada ganacsiga metelaan xalka ugu fiican, naftaada u garsoor:
Soo bandhigida aalado ganacsi
Xiriirka Youtube - ici cliquer - si aad cinwaan hoose ugu qori karto fiidiyowga - sida loo sameeyo -
Qoraalka fiidiyowga Soo bandhigida aaladeheena ganacsiga
Miyaad ka daashay soo dhawaynta dan yar?
Waxaad jeclaan lahayd inaad ka macaashto suuqa saamiyada, laakiin ma lihid aqoonta lagama maarmaanka ah ama ma lihid waqti aad ku daryeesho? Waxaa laga yaabaa inaad ka baqeyso shilalka iyo maal-gashiga nasiib-darrada ah ama laga yaabee inaad rabto inaad ku ballaadhiso maal-gashigaaga?
Naso kalsooni: waxaan kuu haynaa xalka!
Ma ogtahay inay suurtagal tahay in wax lagu qiyaaso suuqa saamiyada, adigoon waxba qaban, aqoon la'aan iyo dhalin dakhli raaxo leh?
Maya maahan riyo, ama khiyaano, laakiin xal!
Sidee? Thanks to algorithms-ka aan soo saarnay iyo kan baaritaanka CAC ama DAX si otomaatig ah u iibsado una iibiyo, faragelin la’aan aadane.
Waa maalgashiga ugu fiican lacagtaada kor u qaado!
Bogga waxqabadka 1-sano wuxuu ku siinayaa macluumaad sax ah.
Xiisaynaya? Dhaqso, maxaa yeelay matooradeena waxaa lagu iibiyaa tiro kooban qiimaha hadda la bixiyo.
Sidee aalado ganacsi ay u shaqeeyaan
Xiriirka Youtube - ici cliquer - si aad cinwaan hoose ugu qori karto fiidiyowga - sida loo sameeyo -.
Isku xirnaanta: Nidaamkeena algorithms waxaa lagu calaamadeeyay moduleka ProOrder ee madal Waqtiga ProReal, iyada oo loo marayo Bangiga Bangiga IG.
Ogsoonow: Annagu kuma xirna ProRealTime iyo / ama IG Bank mana ka helno wax guddi ah iyaga.
CAC: France 40 Cash (€ 1) - CAC - Tusmada 40ka shirkadood ee ugu wakiilka badan Faransiiska suuqa.
CFD: CFD waa shey wax soo saar ah oo ka dhigaya mid fudud oo aan qaali ahayn in lagu qiyaaso qalabka maaliyadeed ee kala duwan.
DAX: Jarmalka 30 Lacageed (€ 1) - DAX - Tusmada 30 kaydka ugu badan ee wakiilada Jarmalka ee suuqa.
Habeenkii: Haddii boos lagu qabto dhamaadka kalfadhiga (badanaa 23: 00 pm) khidmadaha maalgelinta ee habeenka waxaa lagu dabaqi karaa iyadoo lagu saleynayo qiimaha guud ee booska.
Qoraalka fiidiyowga Sidee ayaanu u shaqeynaa aalado ganacsi
Nidaamkeena algorithms waxaa lagu calaamadeeyay barnaamijka ProOrder ee barnaamijka ProRealTime, iyadoo loo marayo Bangiga Bangiga 'Banque IG'. Waxay iibsadaan oo u iibiyaan gabi ahaanba si otomaatig ah.
Matoorradeena ayaa iska baaraya suuqa CAC ama DAX oo ay go'aanadooda ku gaaraan si macquul ah, iyagoo raacaya dhab ahaan istaraatiijiyada dejisay.
Aqoon uma baahnid suuqa saamiyada ama barnaamijyada matoorradeenuna way shaqeyn doonaan xitaa marka kombiyuutarkaaga la deminayo.
Ku-qiimaynta suuqa saamiyada iyadoo la adeegsanayo algorithms-keena waxay ka dhigan tahay soo-dhaweyn soo dhaweyn ah haddii aad ka daashay helitaanka dulsaar yar.
Eexda cilmu-nafsiga ayaa inta badan door ka ciyaara khiyaanooyin aad u xun u male. Mashiinadeena, khatartani ma jirto.
Dhammaan jagooyinka la qabtay waa la xiray isla maalintaas si loo inaanu bixin khidmadaha maalgelinta habeenki.
Tani waxay sidoo kale ka hortageysaa farqiga u dhexeeya habeenkii iyo maalmaha nasashada.
Waad ku mahadsan tahay faa'iidooyinka CFDs way fududahay inaad kasbato waxbadan. Waxaan ku tusineynaa sida bogga Guul +.
Haddii shuruudaha qaarkood la buuxiyo, robotku wuxuu sameyn doonaa iibsasho muddo gaaban ama amar gaaban. ka soo horjeedda jihada isbeddelka ugu weyn.
Tani waa istiraatiijiyad wax ku ool ah, maxaa yeelay suuqa saamiyada kala duwan inta badan.
Maalgashadayaasha adeegsada Istaraatijiyadaha soo socda waa inay qaataan khasaaro badan oo yaryar ka hor intaanay samayn macaash weyn. Habkani, oo waliba waxtar badan leh, wuxuu leeyahay cillad u baahan degenaansho badan.
Robotyadeenna ganacsi waxay ku qalabaysan yihiin a qaado Faa'iido (sare) iyo a Stop Loss (hoose) in la xidho meheradaha. Inkasta oo ay jiraan shuruudo gaar ah kuwani si dhakhso leh ayaa loo xidhi doonaa.
Waxay firfircoon yihiin inta lagu jiro saacadaha furitaanka caadiga ah ee sarrifka saamiyada, laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa 17:30 galabnimo. Waxay ahayd muddadan in faafida ayaa ugu raqiisan iyo tan isbeddelku waa kan ugu sarreeya.
Mashiinnadayada ganacsi waxay ku saleysan yihiin shumacyo 30 daqiiqo. Waxba kuma laha ganacsiga soo noqnoqda kaas oo dhiniciisa ka baaraandega kumanaan macaamil ilbiriqsi kasta, kaas oo loogu talo galay shirkado gaar ah oo ay tahay inay ku ganacsan karaan lacag aad u tiro badan. Kuwaasi waa markaas aalado astaamo xun leh, iyo sabab macquul ah, maadaama ay u muuqdaan inay si macmal ah u bedelaan qiimaha qalabka maaliyadeed ee ay ka ganacsadaan si ay uga macaashaan.
Faahfaahin ku saabsan algorithms-ka
Mashiinnadayada ganacsiga waxay adeegsadaan Supertrend> tilmaame iyo a Celcelis dhaqaaq si loo ogaado jihada isbeddelka ugu weyn.
Waxay u adeegsadaan Bollinger Bands iyo Stochastic Oscillator si ay u arkaan dib u soo noqoshada isbeddellada.
Waxay xoojinayaan ADX iyo ADXR si loo qiyaaso xoogga isbeddelka.
Waxay tixraacaan Tilmaamayaal kala duwan si ay u shaandheeyaan meheradaha khatarta u yeelan kara.
Waxay adeegsadaan Tilmaamayaal kale si ay u joojiyaan ganacsiga goor hore iyagoo kuxiran sicirka sicirka.
Waxay mararka qaarkood dhaqaajiyaan Joojinta Khasaaraha soo socda.
Robotyadeenu dhammaantood waxay ku qalabeeysan yihiin Qaadasho Faa'iido (sare) iyo Joojin Joojin (hoose).
Maxaa loo adeegsadaa Tilmaamayaashaan Farsamada?
ADX et ADXR : waxay cabiraan awooda lagu dhaqaajinayo qiimaha meel ka baxsan kala duwanaanshaha xilligii hore.
Kooxaha Bollinger : waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo heerarka xad dhaafka ah iyo xad dhaafka ah. Waxay tilmaamayaan in suuqu deggan yahay ama is bedbedeli karo.
Celcelis dhaqaaq : waxay muujiyaan qiimaha celceliska qiimaha inta lagu jiro muddada la siiyay. Waxay leeyihiin saamaynta qiimaha jilicsanaanta.
Nasiib darro : waa oscillator oo kashifaya meelaha sida xad dhaafka ah loo iibsado iyo loo iib geeyo.
Supertrend : waxay u socotaa sicirka kor ama ka hooseeya iyadoo ku xiran hadba sida ay wax u socdaan. Waxay si wax ku ool ah u sifeeysaa dhaqdhaqaaqyada yaryar ee koorsada.
MUUQAALO KA Ganacsada Aaladda
Robotyadeenna ganacsiga ee ficilka ah
Indices iyo Maamulka Lacagta
Maareynta Lacagta iyo Warbixinnada
Ganacsiyo la Robot Trading
Soo gaabinta maaliyadeed
Xuquuqda daabacaadda © 2020 - Robot-trading.io Xuquuqda daabacaadu way xifdisan